Maalinta: Sebtember 18, 2018
UDEM-HAKSEN Ka jawaab celinta baska
Sivas, qiimaha sare ee gaadiidka waxaa lagu go'aamiyaa 1.50 ilaa 1,75tlye, 2.75 3.25 tl. Tixgelinta dhererka wadada shuruudaha Sivas, waxaan u aragnaa qiimaha socodka inuu yahay mid qaali ah. Qiimaha isku midka ah ee magaalooyinka waaweyn [More ...]
InnoTrans 2018 waxay albaabbada u fureysaa martida martida ah ee Berlin
INNOTRANS 2018 (Nidaamka Teknolojiyada Caalamiga ah iyo Gawaarida), oo ah carwada ugu weyn adduunka ee tareenka, ayaa ka bilaabatay Sebtember 18 magaalada Berlin, Jarmalka. 2018 wuxuu qabtay ilaa iyo sanadkaan [More ...]
Madaarka cusub ee Istanbul wuxuu noqon doonaa Xarunta Gaadiidka Carooga
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa noqon doona kan ugu weyn adduunka marka laga hadlayo adeegga in laga kireeyo meel ka mid ah garoonka diyaaradaha ee Istanbul UPS, DHL, FedEx, sida shirkadaha waaweyn ee xamuulka qaada, ayuu yiri. Turhan, [More ...]
Garoonka diyaaradaha Sadexaad ee Wasaaradda Gaadiidka
Waxaa jiray waajib ah in la sameeyo bayaanno dadweyne oo ku saabsan dhacdooyinka iyo barta laga gaadhay garoonka diyaaradaha. Mashruuca Our ugu weyn ee Jamhuuriyadda Turkiga iyo wasaaradda shaqaalaha khibrad leh kuwaas oo la socda dhacdooyinka dhismaha cusub ka masayrsan xnumx.havalim dunida [More ...]
Gaadiidka aan kala go'a lahayn ee caasimadda
Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa ku dhammeystirtay dhismaha waqti rikoor ah, isgoysyada cusub ee loo furay adeegga, maalintii ugu horreysay ee furitaanka caasimadda waxay ahayd jaakadda nolosha ee taraafikada caasimadda. Akköprü, Samsun Wadada hore ee Türk Telekom iyo [More ...]
Isku xirka Dilovası West Works wuxuu shaqeynayaa
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, Magaalada Dilovas center si loo yareeyo gelitaanka iyo bixitaanka ayaa qabanaya shaqada Isgoyska Galbeedka. Hub dheeri ah iyo buundooyin ayaa laga sameyn doonaa isgoyska dhexdeeda iyada oo la raacayo qaab dhismeedka howlaha iyo isku xirnaannada ayaa la bixin doonaa. Mashaariicda socda [More ...]
Digniinka wadada Umuttepe
Isgoyska Kocaeli ee Wadada Waqooyiga Marmara way sii socotaa. Shaqada isgoyska ayaa laga fulinayaa aagga isu socodka Umuttepe ee Yeşilova ee wadada Kandira. Waxay ku taalaa Kurtulus Boulevard, oo gaadiid ku siisa Umuttepe sababta oo ah isgoyska Wadada Waqooyiga Marmara. [More ...]
Degmada Badhasaabka Gobolka Bursa wuxuu ku dhawaaqay 2018 inuu yahay Year Road
Isagoo ku dhawaaqay Sanadka 2018 ee magaalada Bursa inuu yahay 'wadada sanadka', Dowlada Hoose ee Magaalooyinka waxay sii wadaysaa howlaheeda shaqo ee dhammaan degmooyinka iyo sidoo kale maalgashiga gaadiid ee ku yaal bartamaha magaalada. Fadhiga casriga ah ee magaalada si meesha looga saaro dhibaatada gaadiidka ajandaha [More ...]
YOLDER Madaxwaynihii ugu dambeeyay ee safarkiisii ​​ugu dambeeyay ee Özden Polat
Aaska Aaska Özden Polat, oo ah Gudoomiyaha Gudida Ururka Wadajirka iyo Wadajirka Dhismaha Wadada Tareenka iyo Shaqaale Shaqaale (YOLDER), oo si lama filaan ah u dhaafay una qalqaliyay bulshada tareenka oo dhan, sanado badan ayuu shaqeynayay. [More ...]
YOLDER Madaxweynaha Özden Polat ayaa lumiyay noloshiisa
Madaxweynaha Y ER Özden Polat wuxuu u dhintay wadne xanuun. Özden Polat, Gudoomiyaha Gudiga Ururka Midnimada iyo Wadajirka Dhismaha Wadada Tareenka iyo Shaqaalaha Howlwadaag (YOLDER), [More ...]
Tirada Shaqaalaha ee TCDD 15 ayaa hoos u dhigay 3 ee 2 Sanadka
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, TCDD 2002'den 36 kun 626'den 2018 kun 13'den 769 kun 2002'a ayaa ku dhawaaqay in ay dhacday. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, TCDD 36'de XNUMX kun [More ...]
Uskudar-Cekmekoy Metro Line 2. Marxaladda furan bisha Oktoobar
8Usküdar - xariiqda metrooga meekmeköy ee 2. masraxa waa la furi doonaa goorma? Jawaabta su’aashan ayaa ah mid shacabka si weyn looga xanaaqsan yahay oo ay yihiin muwaadiniin ag fadhiya Çekmeköy. Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Mevlüt Uysal, Yamanevler-Çekmeköy qaybta Üsküdar Çekmeköy tareenka [More ...]
Mar labaad mar kale Greve ee IZBAN
Wadahadallada TİS ee u dhexeeya Demiryol-İş iyo İZBAN, daqiiqadihii muranka ayaa la ilaaliyay. Haddii ay dhacdo in lagu guuldareysto in heshiis laga gaaro wadahadallada CBS ee u dhexeeya Demiryol-İş iyo İZBAN, muran ayaa la hayey. 2 [More ...]
Ku soo Dhawow Dhamaadka Dhamaadka MCBU Muradiye Campus Road
Dawladda Hoose ee Manisa, Manisa Celal Bayar University Muradiye Campus jidka loo maro dhamaadka waxbarashadu waxay bilaabantay. Wadada lagu gaadhayo sharaf iyo muuqaal aamin ah shaqada la qabtay, Dawlada Hoose ee Magaala Weyn [More ...]